Fifidianana 2013: tsy azo antenaina. | mandimby maharo
Fifidianana 2013: tsy azo antenaina.	Posted on 8 December 201310 December 2013 by Mandimby Maharo	Manomboka milatsaka tsy miato ny orana eto Madagasikara. Fahavaratra;, vanin-taona maintsoahitra. Vanim-taona mahabe fahasahiranana ny rehetra satria an-tanan-dany avokoa. Na ny eny an-banivolo izay eo am-pamafazana ny masomboly, ka lany vola amin’ireo fanakaramana mpanetsa sy mpihosy, na ny ety an-drenivohitra izay vao avy nampiditra mpianatra sy manomana ireo adidy maro miandry amin’ny faran’ny taona. dia samy mitady izay sitrany ahay analana hanohanana, na dia anio fotsiny aza
Amin’izao fotoam-pahavaratra izao koa nefa no naneketsika ny hanatontosana ny fifdianana. Raha ny resaka nandeha nandritra ny 4 taona nisin’ny tetezamita dia hoe: tsy hotanterahina ao anaty fotoam-pahavaratra intsony ny fifidianana satria manahirana na dia ny hanaovana ny fampielezan-kevitra ihany aza. Saingy, ny tetezamita moa tsy mba mahay mitana ny teny nomena foana hatrizay , ka dia indro fa dia ny 20 desambra 2013 no ho tanterahina ny fifidianana. Tsy fifidianaan izay ho filoha fotsiny ihany, fa hitambatra amin’izay ho salombavam-bahoaka koa. Tsy hay aloha izay fepetra tsy azo nihoarana ka nanesikaireo mpikarakara ny fifdianaana izay niventsoventsy ny fahaleovan-tenany handika izany fenitra nilokalokana izany. Fenitra izay voadika tany anaty lalana mihitsy. Lalana izay toa tsinotsiniavina ankehitriny.
Santionany amin’ny fandikana lalana iray io tsy fanajana ny fotoana afahana manao fifidianaan io. Fa ankoatr’io dia isan’ireo fandikan-dalana efa nosazian’ny fitsarana koa ny fampiasana ny fitaovam-panjakana, sy ny fahefam-panjakana hanaovana ny fampielezan-kevitra tamin’ny fihodianan voalohany ireny. Nolazainy fa fandikan-dalana izany ary diso iza nanao izany, saingy hatreto aloha dia tsy misy ny didy fanasazina navoakany. Vao ny herinandro lasa teo koa no nodinganina ny lalana ka dia namoahana didy fa afaka manatrika fampielezan-kevitra ho an’ny kandida izay tiany avokoa na dia ireo ao anatin’ny komisiona mahaleotena aza. Koa dia mandihy tsy menatra ireo kandida ho ao amin’ny fahefana mpanao lalana, izay sahy mandika lalana, Mandihy satria nolavin’ny fitsarana mpampihatra lalana ny fitorina azy ireo ho mpandika lalana tamin’ny namoahan’ny mpiaradia aminy, izay natao ho eo ambany lalana, lalana hafahafa.
Koa na inona na inona ho valin’io fifidianana io dia mahakely finona ny hafahan’ity Nosy ity ao anaty krizy. Ny fototry ny atao hoe firenena mihitsy manko no tsy misy eto dia ny ” tany tan-dalana “. Raha samy manaiky ny hanaja ny lalana tokoa manko ny rehetra dia handeha ho azy ny fampandrosona. Teny zato, kabary arivo fa ny atao no hita. Aoka ary tsy ho sodokan’ny fanambatambazana ho fanalana hidihidy amin’izao maintsoahitra izao isika ka hivarotra ny firenena. Ka ho sanatria latsa-nenina any amin’ny fotoam-pararano, hiotazana ny vokatry ny nafafy. Samy tompon’andraikitra avokoa na ny mpilatsaka ho fidina, na ny mpifidy amin’izay fotoana izay.
Tags: fifidianana, Madagasikara, MAPAR, mdg2013, Rajaonarimampianina, RobinsonCategories: politique